Ahoana ny fomba tsara handinihana sy hamoronana rindranasa amin'ny fitaovana SEO amin'ny aterineto?
Tsy ilaina ny milaza fa mihoatra noho ny zava-dehibe ny mitantana lohataona madio amin'ny tranokalanao na ny bilaogy amin'ny fotoana. Ary ny mombamomba anao amin'ny rohy dia ny zavatra tokony hatao amin'ny fikarakarana manokana. Midika izany fa ny fanaraha-maso marina tsara isaky ny mamorona backlinks amin'ny fitaovam-pifandraisana an-tserasera dia tokony ho lasa MALAGASY amin'ny tetikadinao mahomby. Mazava ho azy, raha tsy te ho very ny fanaraha-maso sy manimba ny fivoaranao amin'izao fotoana izao ao amin'ny SEO miaraka amin'ny rindran-damosina marobe izay hita fa ny toaka.
Andeha hojerentsika - Ny fanaraha-maso ny mombamomba ny rohy dia tokony ho fotoana fandaniam-potoana sy mety tsy azo atao mihitsy, farafaharatsiny. Ity dia rehefa miatrika ny filàna mavesatra ianao mba hahatonga ity dingana ity ho toy ny automatisation amin'ny fampiasana fitaovam-pitaovana manokana. Raha heverinao fa ny ankamaroan'izy ireo dia misy amin'ny fidirana malalaka, angamba fotoana ho anao handinihana ny mombamomba ny rohy ary hanadio ny korontana. Ary maro ireo safidy maro samihafa hanampy anao tsy hamorona backlinks amin'ny fitaovana maoderina an-tserasera fotsiny, fa manaova fandinihana lalindalina kokoa momba ny fahombiazanao SEO manontolo, ary koa ny fandrosanao amin'izao fotoana izao amin'ny fananganana rohy amin'ny rindranasa.
Inona ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fanandramana fandalinana SEO lalindalina rehefa mamorona backlinks amin'ny fitaovana an-tserasera? Raha tsorina, dia ho vitanao ny hampitombo ny vokatr'ireo andalana ambaratonga rehetra napetraka ao amin'ny tranokalanao na ny blôginao, ary koa ny fahombiazan'izy ireo amin'ny SEO izay azo averina avo roa heny na telo heny. Raha ny marina, nahoana ianao no tsy tokony hanararaotra izany fotoana izany? Aza misalasala manitsy ny zava-drehetra amin'ny fomba mahomby amin'ny fampiasana fitaovam-pifandraisana ankavanana - ary ataovy mora kokoa ny zavatra ataonao.
Raha ny amiko, efa zatra ny fikarohana ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fifaninanana fifaninanana nichehiko aho mba hamoronana rindran-damina amin'ny fampivoarana ny tranokalako tsara indrindra amin'ny Internet. Raha ny marina, niasa tamim-paharetana aho mba hankafizako ny fitomboan'ny fitomboan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala, ary koa ny fandrosoana mivaingana ao amin'ny teboka PageRank. Mazava ho azy, androany dia misy malalaka ny rindrambaiko rindrambaiko isan-karazany mba hamoronana rindran-damina ary fitaovana fanamarinana an-tserasera hikarakarana fanaraha-maso maharitra.
Raha tsy nanana ny rohy momba ny rohy mifandraika amin'ny ambaratonga, miaraka amin'ny fahatsapany ankapobeny ao amin'ny SEO, sy ny tsimokaretina rehetra momba ny lalan-tsarimihetsika - ny lalao fikarohana ao amin'ny tranonkalako dia tsy hampandroso an'izany mihitsy, tokony hanaiky aho. Raha jereko ny vahaolana tsara indrindra momba ny fananganana fanamafisam-peo, ny fikarohana fifaninanana, ny fanadihadiana sy ny soso-kevitra haingana, dia manoro hevitra aho ny hanandrana ireto fitaovana manaraka ireto: Google Webmaster Tools (tonga lafatra amin'ny rohy vaovao, maimaim-poana sy mahomby), Ahrefs (fandalinana tanteraka ny rohy aty / ivelany + Bonus tapakila raki-peo), Semalt Analyzer (tahiry be dia be, fanombanana mari-pahaizana momba ny rohy), SemRush (fitsaràna amin'ny takila fifaninanana, sarobidy feno matavy). Ary mety ampiasanao fitaovana hafa toy ny Open Site Explorer (Moz), na ny Screaming Frog SEO Spider (indrisy fa tsy nanana fahafahana nanandrana nampiasa azy aho). Raha ny zava-drehetra, dia ianao ihany no manapa-kevitra Source .